Sida loo furo galka hal gujin gudaha Windows 11 | Forum Mobile
Sida loo furo galka hal gujin gudaha Windows 11
Daniel Terrasa | 28/10/2021 09:00 | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Waxaa jira shakiyo iyo su'aalo badan oo la socda furitaanka nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Microsoft. Tusaale ahaan, isticmaaleyaal badan ayaa weydiiyay su'aasha ah sida loo furo faylalka hal gujin gudaha Windows 11. Ma la mid yahay Windows 10 iyo noocyadii hore? Ma jiraan wax khiyaano ah ama wax cusub?
Dhab ahaantii, wax walba waa sidii ay weligeed ahaan jireen. Ama maya. Waxay kuxirantahay sida aan rabno inaan u habeyno ikhtiyaarkeena. Waxay u muuqataa jahawareer, laakiin runtu waa mid aad u fudud. Hoos ayaan ku sharaxaynaa.
1 Habka laba-guji ee caadiga ah
2 Sida loo awood hal-guji galka furan ee Windows 11
3 Dami Hal-guji Folderka Furan ee Windows 11
Habka laba-guji ee caadiga ah
Sida caadiga ah, si aad u furto fayl gal gudaha Windows 11 waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa laba jeer guji iyaga ku saabsan. Habka qadiimiga ah, oo si fiican loo yaqaan adduunka oo dhan. Waqtigaas Microsoft waxay dooratay nidaamkan si ay uga fogaato inay si lama filaan ah shay ugu furto PC-gaaga.
Si kastaba ha ahaatee, qof walba kuma qanacsanayn habkan wax loo qabanayo. Microsoft waxay heshay sanado indho-indheynta isticmaalayaasha badan oo tixgeliya in tani aysan ahayn mid aad u firfircoon ama aan si toos ah loo baahnayn. Way fududahay in la qiyaaso doodooda: 'Waa maxay sababta ay qasabka labaad ugu baahan tahay? Waa maxay wakhti lumis aan macquul ahayn! "
Cabashooyinkan waa la maqlay, inkastoo inta badan isticmaalayaasha aysan wax dhib ah ku qabin laba jeer gujinta. IYO xalku wuxuu ahaa solomonic, isku dayaya in uu qof walba ka farxiyo. Wax dhif ah ayaa lagu guuleysto, inkastoo kiiskan ay u muuqato in uu sameeyo.
Sidaa darteed, kuwa aan ku qanacsanayn, gudaha Windows 11 waxaa suurtagal ah in lagu furo faylalka hal mar. Kuwa door bida in arrimuhu u sii ahaadaan sidii caadiga ahayd ma aha inay wax sameeyaan.
Sida loo awood hal-guji galka furan ee Windows 11
Si aad awood ugu yeelatid doorashadan waa inaad raacdaa talaabooyinkan soo socda:
Marka hore, waa inaad furto Furaha Faylka isku mar riixaya furayaasha Windows + E.
Marka xigta waa inaad gujisaa saddex dhibic icon, sida ka muuqata sawirka kore, si aad u soo qaadatid liiska xulashooyinka cusub.
Liiskan waxa ka muuqda sanduuqa wada hadalka ee "Xulashada faylka".
Waxaa ku jira «Guud» tab waa inaad doorataa ikhtiyaarka "Hal guji si aad shay u furto."
Ugu dambeyntii waa inaad gujisaa badhanka "Codso" si aad u kaydiso isbedelada oo guji "OKAY" si aad uga baxdo "Faylka Options" menu.
Iyada oo goobtan la awooday, marka aan rabno in aan dooranno fayl kasta ama walx kasta, si fudud dul heehaab dhowr ilbiriqsi (ficil beddelaya kan ugu horreeya ee labada gujis ee caadiga ah). Kadibna waxaan ku furi karnaa hal gujin.
Dami Hal-guji Folderka Furan ee Windows 11
Sida loo joojiyo hal-guji galka furan ee Windows 11
Waxaa suurtogal ah in isticmaaleyaal badan lagu dhiirigeliyo inay tijaabiyaan doorashadan cusub Windows 11 si ay u arkaan sida ay u shaqeyso, laakiin markaa waxay rabaan ku noqo habka soo jireenka ah ee laba-guji. Waxa kale oo suurtogal ah (sababta u diiday?) in kuwa sheegtay doorashadan ay go'aansadaan inay iska tuuraan mar haddii ay tijaabiyeen. Oo xataa waxaa jiri doona kuwa raba inay ka boodaan geli labada ikhtiyaar: hal gujin iyo laba jeer guji, sida ku habboon waqti kasta.
Dhammaan kiisaskan, waxaa jira dariiqa looga baxo curyaaminta ikhtiyaarka ah in lagu furo faylasha iyo faylalka hal mar. Waa kuwan tillaabooyinka la raacayo:
Sida kiiskii hore, si aad u bilowdo waa inaad furto Furaha Faylka isku mar riixaya furayaasha Windows + E.
Markaa waa inaad gujisaa saddex dhibic icon si aad u soo bandhigto liiska ikhtiyaariga ah ee shaashadda.
In menu this, sida aynu hore u soo aragnay, sanduuqa wada hadalka ee "Xulashada faylka".
Aan aadno "Guud" tab, Halka markan ay tahay inaad doorato ikhtiyaarka "Laba jeer guji si aad u furto shay".
Waxaan riixnaa badhanka "Codso" si isbeddellada la sameeyay loo badbaadiyo oo aan gujino "OKAY" si aad uga baxdo "Faylka Options" menu.
Ogaanshaha labada habba, waxaan isticmaali karnaa laba jeer gujinta caadiga ah ama habka hal gujis si aan u furno faylalka iyo faylalka gudaha Windows 11, annagoo awood u leh inaan mid kasta dooranno sida ay doorbidayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida loo furo galka hal gujin gudaha Windows 11
Amarka sirta ugu qosolka badan Alexa
Kani waa daawashada sawir ee ugu fiican Windows 10